Sawir beddele sharrixiisa. - Hoyga Aqoonta
Sawir beddele sharrixiisa.
ka qayb galka: 168
Waxaa la qoray : [ 01-05-2013 ]
Dhammaan aqoonyahannada hoygan waad salaamantihiin.
Farriin iiga timid hoyga iyo codsi aqoonyahan ayaa igu
kallifay sharraxaan waan istaahishaane ka faa'iidaysta
gaar ahaan akhyaarta sawirrada jecel inay ku cayaaraan
waxna ka beddelaan.
Casharkani wuxuu wataa sawirro ee mid mid ula soco.
Tan kale ee aan idiin sheegayo ayaa ah inaan barnaamijkan
aqoon badan u lahayn ama aanan xiisayn barnaamijyada
noocan ah balse aan jeclaystay inaan u bandhigo dhallinyarada
jecel ama xiisaysaba. Tan kale anigu tallaabooyinka ayaan idin
tusi idinna waxaa la'idinka yaqaan horumarinteeda iyo inaad nagala
qayb qaadato sawirrada aad soo saarto ama beddesho.
Ku soo dhowaada mar kale Face0nBody.
Marka hore barnaamijka halkan kala deg
Markaana riix (Fees on boody)
Faah-faahin: Ogogw markaad sawirka jarayso wejiga ku dhejinayso waa inaad adeegsataa
(Cntrl+Mouse) Yacni adiga oo haya furaha (Ctrl ama kontorool yaad raacin jiirka
ku deji kumbiyuutarkaaga oo geli (Main code: iyo Pro code) midba mar.
Sawirkan ayaa kuu soo baxaya ee markaba riix (Start)
codso sawirka aad rabto inaad beddesho
Riix Continue markaad sawirka aad rabto soo qaadato
Markaad sawirka dooratidna riix Continue illaa aad tan ka helaysid
Markaad mareegga wejiga saaran ku doorato intaad ka rabto riix weli Contuinue
Hadda wuxuu ku siinayaa inta aad ka rabtid wejigaas oo waxaad jari kartaa intaadan u
baahnayn markaana riix Continue
Sidaan kor ugu sheegay aniga barnaamijyada sawirrada waa la'iiga fiicanyahaye tani
waa sharrax guud oo ku saabsan
barnaamijkan adiguna waxaad heli markaad intan barato haddaad xiisayso sawir ku
cayaarista waxyaabo badan oo uu ka koobanyahay
barnaamijkani. Fadlan haddii aad sawirro ku beddesho timelinka facebook-ga
barnaamij.com soo raaci si loo kala faa'iido.
Mowduucii hore : Sawir beddele sharrixiisa. -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Rooble
Jawaabta: Sawir beddele sharrixiisa.
Waad ku mahadsantahay runtii aqoonyahan baa si xad dhaaf ah u raadinayey sharrixiisa.
Marka qiimaynta ugu sarraysa iga hano aniga maanta
Nambarka Xubinka : 955
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Apr 2013
ka qayb galka : 20
waan ka heley barnaamijaani
Warqad gaara u dir Cali Axmad
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Cali Axmad
Waxaa la qoray : [ 02-05-2013 ]
Heer sare Rooble
Waxaa la qoray : [ 04-05-2013 ]
Waxaan weydiinayaa maammulka xubinkii soo codsaday barnaamijkani miyaanu jawaab ku darsanayn mise wuxuu ahaa Cali Axmad. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin jawaabaha qolyo kalena waan sugayaa ee horay uga soo jawaabi jiray qoraallada kkk.
adiga, cayaaraan, code, deji, farriin, furaha, geli, haya, istaahishaane, jiirka, kallifay, kontorool, kumbiyuutarkaaga, main, mar, markaba, midba, pro, raacin, riix, salaamantihiin, sharraxaan, start, yaad, yacni
qeebtii labad ee sharaxa bedilida sawir danbedka google Dayax Kumbiyuutarka & Internet-ka 5 18-07-2012 10:30 PM
Aykoon beddele Rooble Golaha Barnaamijyada 9 01-07-2012 03:21 PM
Saacaddu hadda waa 09:28 AM.